China Tungsten Carbide Wear Inserts na Harding na-eche ihu ihe nrụpụta na ụlọ ọrụ | N & D Na-eme Ihe
Tungsten Carbide Wear Inserts na Harding na-eche ihe
* Tungsten Carbide, cobalt nragide
* Nchekwa onwe
* Higher eyi ndị na-eguzogide
Tungsten carbide ike alloy na-kpọmkwem iji guzozie corrosion, abrasion, eyi, fretting, eji eyi na mmetụta ma onshore na offshore na elu na sub-oké osimiri akụrụngwa ngwa.
Tungsten carbide bụ kemịkal kemịkal nke nwere ọnụọgụ nke tungsten na atọm carbon. Tungsten carbide, nke a makwaara dị ka "simenti carbide", "alloy siri ike" ma ọ bụ "hardmetal", bụ ụdị ngwongwo metallurgic nke nwere tungsten carbide ntụ ntụ (usoro kemịkal: WC) na ihe mgbochi ndị ọzọ (cobalt, nickel wdg.). enwere ike ịpị ma mepụta ya na ahaziri ya, enwere ike igweri ya na nkenke, enwere ike ịgbanye ya ma ọ bụ jigide ya na ọla ndị ọzọ. Iche iche iche na akara ule nke carbide nwere ike e mere dị ka chọrọ maka ojiji na ngwa zubere, gụnyere chemical ụlọ ọrụ, mmanụ & gas na mmiri dị ka Ngwuputa na ọnwụ ngwaọrụ, ebu na-anwụ, na-eyi akụkụ, wdg
Tungsten carbide ọtụtụ-eji na ulo oru ígwè, na-eyi na-eguzogide ọgwụ ngwá ọrụ na mgbochi corrosion. Tungsten carbide bụ ihe kachasị mma iji gbochie okpomọkụ na mgbaji ọkpụkpụ na ihe niile siri ike ihu.
The tungsten carbide wear inserts na-eji bee site ígwè casing na plọg na-ewepụ ala-onu junk. E nwere ike ịmepụta iche iche nke square, gburugburu, ọkara gburugburu, ntinye oval. A na-eji ihe siri ike na-eche ihu maka ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ n'elu. Tungsten Carbide Stabilizer Inserts For Wear Protection of Drill Bits.The Inserts na-edobe n'otu ụzọ ahụ dị ka ọkọlọtọ insert na enweghị usoro pụrụ iche achọrọ. The carbide tile na-sintered site siri ike-grained sikwuo carbide, na Njirimara nke elu ekweghị ekwe na ezi transverse-mgbawa ike, nakwa dị ka corrosion eguzogide, iguzogide acid na alkali, ogologo ọrụ ndụ. N & D carbide na-arụpụta ihe ntinye akwa carbide dị elu maka ihe mkpuchi ihe.
Nke gara aga: Tungsten Carbide Nozzles
Osote: Tungsten Carbide Wear Bush na aka uwe
Tungsten Carbide Wear Ntinye
Tungsten Carbide Flowgba Igwe
Tungsten Carbide valvụ mapụtara Parts
Tungsten Carbide Bush maka Ọdụdọ Mmiri ...
Ahaziri Tungsten Carbide eyi Parts maka Oil ...